သားသားမီးမီးတှကေို အိမျမှုကိစ်စ ဝိုငျးကူညီဖို့ ဘယျလို လှုံ့ဆျောမလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Family သားသားမီးမီးတှကေို အိမျမှုကိစ်စ ဝိုငျးကူညီဖို့ ဘယျလို လှုံ့ဆျောမလဲ?
သားသားမီးမီးတှကေို အိမျမှုကိစ်စ ဝိုငျးကူညီဖို့ ဘယျလို လှုံ့ဆျောမလဲ?
အိမျမှုကိစ်စတှေ ဝိုငျးကူညီပေးဖို့ ကလေးတှကေို လှုံ့ဆျောရခွငျးက မိသားစုတှေ နစေ့ဉျ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ စိနျချေါမှုတဈခု ဖွဈပါတယျ။ မိဘတှဟော သားသမီးတှနေဲ့ ပဋိပက်ခမဖွဈအောငျ အိမျမှုဝယြောဝစ်စအားလုံးကို သူ့တို့ဘာသာသူတို့ ကြုံးရုံးလုပျဖို့ ရှေးခယျြလေ့ ရှိကွပါတယျ။ သို့သျော ကလေးတှကေို အိမျမှုအလုပျတှေ ဝိုငျးကူညီခိုငျးခွငျးက ကလေးတှမှော အရေးကွီးတဲ့ တနျဖိုးတှနေဲ့ ကြှမျးကငျြမှု စကေးတှကေို သငျပေးဖို့ အသုံးဝငျတဲ့ tool တဈခုဖွဈလာ နိုငျပါတယျ။
အတှေးအချေါနှငျ့ ပညာရေးသိပ်ပံ ကြှမျးကငျြသူ Joseph Knobel ရဲ့အဆိုအရ အိမျမှု့ဝယြောဝစ်စတှကေို ကလေးတှေ ကူညီခွငျးက အရမျးအရေးပါ ပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ ဒါတှကေ သူတို့ဘဝမှာ ကွုံတှရေ့မယျ့ ပထမဆုံး တာဝနျယူမှုမြား ဖွဈလို့ပါပဲ။
သငျ့ကလေးတှဆေီကနေ အိမျမှုကိစ်စဝိုငျးလုပျဖို့ အကူအညီယူခွငျးဟာ အိမျသနျ့ရှငျးစဖေို့အတှကျသာ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ လူကွီးဖွဈလာတဲ့အခါ အကူအညီဖွဈစမေယျ့ ကြှမျးကငျြမှုမြားနှငျ့ တနျဖိုးတှကေို သငျပေးခွငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူတို့အတှကျ အိမျအလုပျ လုပျရတာက ပြျောစရာမကောငျးဘူး ဆိုပမေယျ့လညျး ကလေးတှဟော အိပျမှုဝယြောဝစ်စတဈခု အောငျမွငျစှာပွီးဆုံးတဲ့အခါ တာဝနျရှိတယျဆိုတဲ့ အသိကို ပိုပွီး ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ဒီစိတျကနြေပျမှုအသိက အရမျးကို စိတျခမျြးသာစနေိုငျပါတယျ။
၂။ ဆှေးနှေး ညှိနှိုငျးတတျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှု (Negotiating skills)
ကလေးတှဟော သဘောတူညီမှုတဈခု ရရှိဖို့ ဘယျလိုကွိုးစားရမယျ၊ ဘယျလို ရလေညျရှငျးလငျးအောငျ ပွောရမယျ၊ သူတို့စိတျကူးတှကေို ဘယျလိုဖျောပွရမလဲဆိုတာ လလေ့ာသငျယူပါလိမျ့မယျ။
၃။ စုပေါငျးလုပျဆောငျမှု (Teamwork)
ကလေးတှဟော တခါတရံ ရညျမှနျးခကျြတဈခု အောငျမွငျဖို့ တခွားသူတှနှေငျ့အတူ ပူပေါငျးဆောငျရှကျတတျဖို့ လိုတယျဆိုတာ သိသငျ့ပါတယျ။
၄။ ထိလှယျရှလှယျမှုနှငျ့ စာနာမှု (Sensitivity and empathy)
အိမျမှုကိစ်စတှကေို သူတို့ ဝိုငျးကူညီတဲ့အခါ အိမျသနျ့ရှငျးမှုကို ထိနျးသိမျးရတာက ဘယျလိုခကျခဲနိုငျတယျဆိုတာ နားလညျ သငျယူပါလိမျမယျ။
၅။ လှတျလပျမှု (Independence)
အိမျတဈဝိုကျကို သနျ့ရှငျးခွငျးဖွငျ့ သူတို့ဟာ အနာဂတျမှာ အိမျမှုဝယြောဝစ်စတှကေို ဘယျလိုထိရောကျအောငျ လုပျရမလဲဆိုတာ သငျယူပါလိမျ့မယျ။
ရောငျးအားအကောငျးဆုံး စာရေးဆရာ Dan Pink ရဲ့အဆိုအရ မိသားစုဟာ မြှဝတေတျတဲ့ တာဝနျသိစိတျတှပေျေါမှာ အခွခေံတယျဆိုတာ သူတို့ကို ပွသရာ ရောကျတာကွောငျ့ အိမျမှုကိစ်စကို ဝိုငျးကူညီခွငျးက ကလေးတှေ အတှကျ ကောငျးတဲ့အရာတဈခု ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ မိသားစုဝငျအခငျြးခငျြး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အကူအညီလိုကွောငျးလညျး သငျယူပါလိမျ့မယျ။
အိမျမှုကိစ်စတှေ ဝိုငျးကူညီပေးဖို့ ကလေးတှကေို လှုံ့ဆျောနညျးမြား
၁။ သူတို့နှငျ့အတူ အိမျမှုကိစ်စလုပျပါ
မိဘတှေ အမှားအမြားဆုံးတဈခုက ကလေးတှဟော အိမျအလုပျ ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာ သိတယျလို့ ယူဆထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ သူတို့လုပျနတောတှကေို ကလေးတှမွေငျပွီး လုပျတတျတယျလို့ ထငျတာကွောငျ့ပါပဲ။
ကလေးတှကေို မိဘနှငျ့အတူ အကွိမျပေါငျးမြားစှာ ဝိုငျးကူညီခိုငျးရငျး သငျပေးဖို့လိုပါတယျ။ ဥပမာ- ရိုးရိုးတာဝနျတဈခုအဖွဈ သူတို့ကို အရုပျတှေ ကောကျတငျခိုငျးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အစမှာ သငျ့ကလေးက စနဈတကြ ဘယျလိုထားရမှနျး မသိနိုငျသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါ မိဘတှအေနနေဲ့ စိတျပကျြမှုကို ဖွဈပျေါလာနိုငျပွီး ကလေးတှကေို အိမျအလုပျ ကူညီခိုငျးခွငျးမှ အလြှော့ပေးသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ကို ဆူမယျ့အစား သူတို့ကို ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာ သငျပွပေးပါ။
၂။ လူတိုငျးမှာ တာဝနျဝတ်တရားရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ
အိမျမှုကိစ်စလုပျဖို့ ကလေးတဈယောကျကို သငျပေးတဲ့အခါ အရေးအပါဆုံးတဈခုက မိသားစုဝငျတှကွေားမှာ တာဝနျခှဲပေးဖို့ ဖွဈပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ မိသားစုဝငျအားလုံးကို တာဝနျကိုယျစီရှိတယျဆိုတာ သူတို့နားလညျစဖေို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါက မိသားစုဝငျတဈယာကျစီရဲ့ စှမျးရညျပျေါမူတညျပါတယျ။ ကလေးတှကေို သငျ့လြျောတဲ့ တာဝနျမြားပေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သူတို့ အသကျအရှယျနဲ့ မမြှတတဲ့ တာဝနျက သူတို့ကို စိတျပကျြစနေိုငျပွီး လုပျဖို့ ပငျြးသှားပါလိမျ့မယျ။
၃။ သူတို့ကို ပိုပွီး လှတျလပျသူတှအေဖွဈ ကွီးပွငျးပါစေ
မိဘတှအေနနေဲ့ ကလေးတှရေဲ့ ထငျမွငျယူဆခကျြမြားကို ထုတျဖျောပွောဆိုဖို့ အခှငျ့အရေး ပေးရပါမယျ။ အဲ့လိုခှငျ့ပွုခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုကို လှုံ့ဆျောပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒါက သူတို့မှာ self-sufficiency ဆိုတဲ့အသိကို ပုံဖျောပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ ပိုပွီးလှတျလပျတယျ၊ ကိုယျကိုယျကို ထိနျးကြောငျးနိုငျတယျဆိုတဲ့ ခံစားမှုက ကလေးတှကေို အိမျမှုကိစ်စတှေ ပိုပွီး ဂရုစိုကျဖို့ လှုံ့ဆျောမှု ဖွဈလာစသေလို ပိုပွီး ထိရောကျပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ကလေးဆီက အကူအညီရယူခငျြတဲ့အခါ မိသားစုအားလုံး အိမျပတျဝနျးကငျြကို သနျ့ရှငျးနတေဲ့ အခြိနျနှငျ့ တိုကျဆိုငျပါစေ။ မိသားစုနှငျ့အတူ အဖှဲ့လိုကျ အလုပျလုပျခွငျးက ကလေးတှကေို ပိုပွီး စိတျအားထကျသနျစပေါတယျ။ အတူတူအလုပျလုပျခွငျးဖွငျ့ အိမျအလုပျတှကေို မှနျမှနျကနျကနျ လုပျတတျသှားပါလိမျ့မယျ။
၅။ အပွုအမှုကောငျးအဖွဈသာ အိမျအလုပျ လုပျပါ
အစောပိုငျးအသကျအရှယျမှာ သငျ့ကလေးကို အိမျမှာအထောကျအကူပေးခွငျးရဲ့ အရေးပါပုံကို သငျပေးပါ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့ တာဝနျဝတ်တရားလို့ ယူဆလာပါလိမျ့မယျ။ နောကျဆုံးသူတို့ အလအေ့ကငျြ့ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
အိမျသနျ့ရှငျးဖို့နှငျ့ နရောခထြားဖို့အတှကျ အပတျစဉျအခြိနျ သကျမှတျထားလြှငျ မိသားစု စုစညျးမှု အလအေ့ထတဈခုကို တညျဆောကျပါလိမျ့မယျ။ ဒီနညျးလမျးက သားသားမီးမီးတှအေတှကျ အိမျမှုကိစ်စတှေ ကူညီပေးဖို့ လိုအပျကွောငျးကို နားလညျလာစပွေီး သာမနျလုပျရိုး လုပျစဉျတဈခုအဖွဈ မွငျလာပါလိမျ့မယျ။
၆။ မိသားစုတှငျးမှာ ပိုပွီးရငျးနှီးလာပါလိမျမယျ
အိမျမှုဝယြောဝစ်စတှမှော သားသမီးတှကေို ပါဝငျစခွေငျးဟာ ခိုငျမာတဲ့ မိသားစုဆကျဆံရေးကို တညျဆောကျဖို့လညျး အကူအညီ ဖွဈပါတယျ။ တာဝနျတှကေို ဖွနျ့ဝခွေငျးက မိသားစု ဝနျထုပျဝနျပိုးနှငျ့ တငျးမာမှုကို လြော့ပါးနိုငျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျး စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ကစြပေါတယျ။
သားသားမီးမီးတွေကို အိမ်မှုကိစ္စ ဝိုင်းကူညီဖို့ ဘယ်လို လှုံ့ဆော်မလဲ?
အိမ်မှုကိစ္စတွေ ဝိုင်းကူညီပေးဖို့ ကလေးတွေကို လှုံ့ဆော်ရခြင်းက မိသားစုတွေ နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေနဲ့ ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် အိမ်မှုဝေယျာဝစ္စအားလုံးကို သူ့တို့ဘာသာသူတို့ ကျုံးရုံးလုပ်ဖို့ ရွေးချယ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် ကလေးတွေကို အိမ်မှုအလုပ်တွေ ဝိုင်းကူညီခိုင်းခြင်းက ကလေးတွေမှာ အရေးကြီးတဲ့ တန်ဖိုးတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု စကေးတွေကို သင်ပေးဖို့ အသုံးဝင်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ်နှင့် ပညာရေးသိပ္ပံ ကျွမ်းကျင်သူ Joseph Knobel ရဲ့အဆိုအရ အိမ်မှု့ဝေယျာဝစ္စတွေကို ကလေးတွေ ကူညီခြင်းက အရမ်းအရေးပါ ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒါတွေက သူတို့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် ပထမဆုံး တာဝန်ယူမှုများ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
သင့်ကလေးတွေဆီကနေ အိမ်မှုကိစ္စဝိုင်းလုပ်ဖို့ အကူအညီယူခြင်းဟာ အိမ်သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်သာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ အကူအညီဖြစ်စေမယ့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တန်ဖိုးတွေကို သင်ပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အတွက် အိမ်အလုပ် လုပ်ရတာက ပျော်စရာမကောင်းဘူး ဆိုပေမယ့်လည်း ကလေးတွေဟာ အိပ်မှုဝေယျာဝစ္စတစ်ခု အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးတဲ့အခါ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိကို ပိုပြီး ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီစိတ်ကျေနပ်မှုအသိက အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းတတ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု (Negotiating skills)
ကလေးတွေဟာ သဘောတူညီမှုတစ်ခု ရရှိဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်၊ ဘယ်လို ရေလည်ရှင်းလင်းအောင် ပြောရမယ်၊ သူတို့စိတ်ကူးတွေကို ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲဆိုတာ လေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
၃။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု (Teamwork)
ကလေးတွေဟာ တခါတရံ ရည်မှန်းချက်တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ တခြားသူတွေနှင့်အတူ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။
၄။ ထိလွယ်ရှလွယ်မှုနှင့် စာနာမှု (Sensitivity and empathy)
အိမ်မှုကိစ္စတွေကို သူတို့ ဝိုင်းကူညီတဲ့အခါ အိမ်သန့်ရှင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရတာက ဘယ်လိုခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုတာ နားလည် သင်ယူပါလိမ်မယ်။
၅။ လွတ်လပ်မှု (Independence)
အိမ်တစ်ဝိုက်ကို သန့်ရှင်းခြင်းဖြင့် သူတို့ဟာ အနာဂတ်မှာ အိမ်မှုဝေယျာဝစ္စတွေကို ဘယ်လိုထိရောက်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ သင်ယူပါလိမ့်မယ်။
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာရေးဆရာ Dan Pink ရဲ့အဆိုအရ မိသားစုဟာ မျှဝေတတ်တဲ့ တာဝန်သိစိတ်တွေပေါ်မှာ အခြေခံတယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ပြသရာ ရောက်တာကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စကို ဝိုင်းကူညီခြင်းက ကလေးတွေ အတွက် ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကူအညီလိုကြောင်းလည်း သင်ယူပါလိမ့်မယ်။
အိမ်မှုကိစ္စတွေ ဝိုင်းကူညီပေးဖို့ ကလေးတွေကို လှုံ့ဆော်နည်းများ
၁။ သူတို့နှင့်အတူ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ပါ
မိဘတွေ အမှားအများဆုံးတစ်ခုက ကလေးတွေဟာ အိမ်အလုပ် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်လို့ ယူဆထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်နေတာတွေကို ကလေးတွေမြင်ပြီး လုပ်တတ်တယ်လို့ ထင်တာကြောင့်ပါပဲ။
ကလေးတွေကို မိဘနှင့်အတူ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝိုင်းကူညီခိုင်းရင်း သင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ- ရိုးရိုးတာဝန်တစ်ခုအဖြစ် သူတို့ကို အရုပ်တွေ ကောက်တင်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစမှာ သင့်ကလေးက စနစ်တကျ ဘယ်လိုထားရမှန်း မသိနိုင်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါ မိဘတွေအနေနဲ့ စိတ်ပျက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ကလေးတွေကို အိမ်အလုပ် ကူညီခိုင်းခြင်းမှ အလျှော့ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ဆူမယ့်အစား သူတို့ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သင်ပြပေးပါ။
၂။ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ဝတ္တရားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဖို့ ကလေးတစ်ယောက်ကို သင်ပေးတဲ့အခါ အရေးအပါဆုံးတစ်ခုက မိသားစုဝင်တွေကြားမှာ တာဝန်ခွဲပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မိသားစုဝင်အားလုံးကို တာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့နားလည်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက မိသားစုဝင်တစ်ယာက်စီရဲ့ စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို သင့်လျော်တဲ့ တာဝန်များပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ အသက်အရွယ်နဲ့ မမျှတတဲ့ တာဝန်က သူတို့ကို စိတ်ပျက်စေနိုင်ပြီး လုပ်ဖို့ ပျင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့ကို ပိုပြီး လွတ်လပ်သူတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းပါစေ
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ အခွင့်အရေး ပေးရပါမယ်။ အဲ့လိုခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သူတို့မှာ self-sufficiency ဆိုတဲ့အသိကို ပုံဖော်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်၊ ကိုယ်ကိုယ်ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုက ကလေးတွေကို အိမ်မှုကိစ္စတွေ ပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့ လှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်လာစေသလို ပိုပြီး ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကလေးဆီက အကူအညီရယူချင်တဲ့အခါ မိသားစုအားလုံး အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းနေတဲ့ အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်ပါစေ။ မိသားစုနှင့်အတူ အဖွဲ့လိုက် အလုပ်လုပ်ခြင်းက ကလေးတွေကို ပိုပြီး စိတ်အားထက်သန်စေပါတယ်။ အတူတူအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အိမ်အလုပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ အပြုအမှုကောင်းအဖြစ်သာ အိမ်အလုပ် လုပ်ပါ
အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ သင့်ကလေးကို အိမ်မှာအထောက်အကူပေးခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံကို သင်ပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားလို့ ယူဆလာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးသူတို့ အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အိမ်သန့်ရှင်းဖို့နှင့် နေရာချထားဖို့အတွက် အပတ်စဉ်အချိန် သက်မှတ်ထားလျှင် မိသားစု စုစည်းမှု အလေ့အထတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလမ်းက သားသားမီးမီးတွေအတွက် အိမ်မှုကိစ္စတွေ ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကို နားလည်လာစေပြီး သာမန်လုပ်ရိုး လုပ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
၆။ မိသားစုတွင်းမှာ ပိုပြီးရင်းနှီးလာပါလိမ်မယ်
အိမ်မှုဝေယျာဝစ္စတွေမှာ သားသမီးတွေကို ပါဝင်စေခြင်းဟာ ခိုင်မာတဲ့ မိသားစုဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ဖို့လည်း အကူအညီ ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်တွေကို ဖြန့်ဝေခြင်းက မိသားစု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့် တင်းမာမှုကို လျော့ပါးနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Previous articleအူရီဒူးမွနျမာရဲ့ ၅နှဈပွညျ့အထိမျးအမှတျအဖွဈ“ရှအေိုးထဲမှာ ရှဒေင်ျဂါးရှာ” အစီအစဉျကို ဆငျနှဲ
Next articleမှေးစားမိဘတှဆေီမှာပဲ ပြျောနရှောတဲ့ ရှဉျ့မလေးအကွောငျး